बार्सिलोना र बार्यनको प्रष्तिष्ठा उच्च बनाएका प्रशिक्षक पेप गुवार्डीवाला म्यान सिटीमा जम्लान् त ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
बार्सिलोना र बार्यनको प्रष्तिष्ठा उच्च बनाएका प्रशिक्षक पेप गुवार्डीवाला म्यान सिटीमा जम्लान् त ???
विश्वमा चर्चित र सफल प्रशिक्षकका रुपमा चिनिन्छन् पेप गुवार्डीवाला । छोटो कार्यकालमा नै युरोपका प्रमुख उपाधिहरु जिताउन सफल पेपको जन्म सन् १९७१, १८ जनवरीमा भएको थियो । बाल्यकालदेखि नै फुटबलमा रुची भएका उनको खुट्टामा प्राय फुटबल नै हुने गथ्र्यो । आफ्नो घर पछाडिको मैदानमा उनी फुटबल अभ्यास गरिरहन्थे ।
सामान्य परिवारमा जन्मेका उनलाई पिता भलेन्टी गुवार्डीवालाले ठुलो प्रेरणा दिएका थिए । पेप जन्मेको गाउँ छाड्न नमान्ने उनीहरु छोराको कारण आफुहरुको जीवन धन्य भएको समेत बताउँछन् ।
ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिडको दबदबा रहेको थियो ।
बार्सिलोना भने नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा थियो । अन्ततः बार्सिलोनाले क्लबको ‘बी’ टिमका प्रशिक्षक पेप गुवार्डीवालालाई नियुक्त गर्यो । रियल मड्रिडको दबदबा तोड्न बार्सिलोनालाई दबाब थियो । सन् २००८ मा बार्सिलोनाले जब पेप गुवार्डीवालालाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्यो तब बार्सिलोनाका सबै फ्यानहरु आश्चर्य चकित परे ।
बार्यन म्युनिख पछि उनको यात्रा विश्वकै कठिन मानिएको लिग प्रिमियर लिगमा भयो । उनी हाल प्रिमियर लिग टोली म्यानचेस्टर सिटीको प्रशिक्षक रहेका छन् । पहिलो कार्यकालमा खासै सफलता पाउन नसकेका उनले क्लबलाई सुधारिरहेको र नयाँ टोली निर्माणमा लागेको जानकारी दिएका थिए ।
आर्सनलसँग एफए कपको फाइनल खेलमा पराजित भएपनि उनले आफु निराश नभएको बताएका थिए । बार्सिलोना तथा बार्यन म्युनिखका आफुलाई प्रमाणित गरिसके तापनि प्रिमियर लिगमा सफलता पाउन भने बाँकी रहेको छ । म्यानचेस्टर सिटीमा रहेर उनले क्लबलाई सफल बनाउने उनी ढुक्क रहेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिग तथा प्रिमियर लिग उपाधिमा समेत सिटीको दबदबा बनाउन उनी प्रयासरत रहेका छन् । फुटबल पण्डितहरुका अनुसार उनले क्लबलाई हरेक पक्षबाट बलियो बनाएको बताउँछन् । क्लबले यस सिजन उपाधि जित्ने उनीहरुको अनुमान रहेकोछ । – एजेन्सी